कुन प्रदेशमा राजधानी तोक्न कस्तो लफडा ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
कुन प्रदेशमा राजधानी तोक्न कस्तो लफडा ?
प्रकाशित मिति २६ असार २०७५, मंगलवार १३:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । प्रदेश सभाको बैठक बस्न थालेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा छलफल हुन सकेको छैन । नाम र राजधानीका विषयमा सांसदहरू पनि विभाजित छन् । यद्यपि उनीहरूले यि दुवै विषयको टुंगो लगाउनुपर्ने माग प्रदेश सभामा पटकपटक उठाउँदै आएका छन् ।
‘जन्मेको ११ दिनमा शिशुको पनि नाम राखिन्छ, तर हाम्रो प्रदेशले ६ महिनामा पनि नाम पाएको छैन, यस्तो अन्योल कहिलेसम्म रहने हो टुंगो छैन,’ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद प्रतापप्रकाश हाङनामले नयाँ पत्रिकासँग भने । सबै दलको सहमति जुटाएर नाम र प्रदेश टुंगो लगाउने सरकारको तयारी छ ।
दलीय विवादले तयारी शून्य
नाम र राजधानीबारे सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूबीचको विवादका कारण प्रदेश सभामा यो विषयले प्रवेश नै पाएको छैन । कांग्रेसले प्रदेशको नाम ‘मिथिला’ उत्तम हुने बताउँदै आएको छ । नेकपाले ‘जानकी’, ‘मिथिला’ वा ‘मिथिला–भोजपुरा’ बनाउन सकिने बताउँदै आएको छ । त्यस्तै, राजधानी जनकपुर वा वीरगन्ज बनाउने भन्नेमा विवाद छ । तर, प्रदेश सभामा यी दुवै विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक छलफल भएको छैन ।
राजधानी टुंग्याउन अध्ययन समिति
प्रदेश ३ मा नामभन्दा पनि राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विवाद चर्को छ । अहिलेको अस्थायी राजधानी हेटौँडा अपायक भएको भन्दै नुवाकोट, काभ्रे, भक्तपुर र चितवनका सांसदले प्रदेश सभामा प्रस्ताव नै दर्ता गराएका छन् । समितिले राजधानी बन्न भौतिक पूर्वाधार भएरनभएको हेर्न मकवानपुर, चितवन, नुवाकोट, काभ्रे र भक्तपुरको स्थलगत अनुगमन गरिसक्यो ।
प्रदेश सभामा छलफलै भएन
सांसदहरूले पटकपटक माग गर्दा पनि प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा प्रदेश ७ को सभामा छलफल हुन सकेको छैन । प्रतिपक्षी कांग्रेसले नाम र राजधानी तोक्न माग गर्दै २७ जेठमा संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव नै दर्ता गराएको छ । प्रस्तावक कांग्रेसले नै चासो नदेखाएकाले प्रस्तावमाथि छलफल नभएको संसद् सचिवालयको दाबी छ । प्रदेशको नामबारे विभिन्न प्रस्तावमाथि सांसदहरू अनौपचारिक छलफल गर्छन् ।
दुई प्रदेशले टुंग्याए नाम र राजधानी
० अहिलेसम्म दुईवटा प्रदेशले मात्रै नाम र राजधानी टुंगो लगाएका छन् । यसमा सबैभन्दा अगाडि तत्कालीन प्रदेश नम्बर ६ देखियो । प्रदेश सभाको दोस्रो बैठकबाटै उसले विवादरहित ढंगले प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ र स्थायी राजधानी ‘वीरेन्द्रनगर’ तोकिसकेको छ ।
० दोस्रो नम्बरमा तत्कालीन प्रदेश नम्बर ४ ले नाम र राजधानी टुंगो लगायो । अघिल्लो साता मात्रै प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम ‘गण्डकी’ र स्थायी राजधानी ‘पोखरा’ राख्ने निर्णय गरेको छ ।
० सत्तारुढ नेकपाभित्रै विवाद रहेका कारण नाम र राजधानीका विषयमा प्रदेश सभामा छलफल हुन पाएको थिएन । ठूलो रस्साकस्सीपछि नेकपा संसदीय दलको बैठकमा नाम ‘गण्डकी’ र राजधानी ‘पोखरा’ राख्ने सहमति जुटेको थियो ।
काठमाडौं । कुनै समय थियो, दान दक्षिणा गरे धर्म कमाइन्छ । धर्म कमाउनकै लागि पितापुर्खाले जग्गा जमिन समेत मठमन्दिर…
नागढुंगाबाट लागूऔषधसहित दुई जना पक्राउ
महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुंगाले लागूऔषधसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । राजधानीको नाका नागढुंगामा प्रहरी निरीक्षक ज्ञानबहादुर खड्काको टोलीले…
काठमाडौं । छोरा मोहका कारण महिलाले छोरीको भ्रूणहत्या गर्ने क्रम बढेको छ । लिंग पहिचान गर्न महिला स्वास्थ्य संस्थामा…
एक क्रिकेटर जोसँग फोन किन्ने पैसा थिएन, अहिले बने करोडपति !
एजेन्सी । न्युजिल्यान्डमा भइरहेको आइसिसी यू–१९ विश्वकप क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका…